The Curtain Xafiiska Iibku - Joornaalka Naqshadeynta
Xafiiska Iibku Naqshadeynta mashruucan ayaa leh qaab gaar ah oo loogu adeegsado Mesh Mesh sida xalka loogu talagalay ujeedooyinka ficil ahaan iyo jimicsiga. Mesh Metal Mesh wuxuu abuuraa lakab daah ah oo khafiifin kara xadka u dhexeeya bannaanka gudaha iyo bannaanka- booska cawlan. Qoto dheerida booska ay abuurtay daahyada translucent waxay abuurtaa heerar hodan ah oo tayo sare leh. Mesh steel steel Mesh Mesh wuxuu ku kala duwanaan karaa xaaladaha cimilada kaladuwan iyo wakhtiyo kala duwan oo maalintii ah. Muuqaalka iyo wareejinta Mesh oo leh muuqaal qurux badan ayaa abuuraya qaab xasilloon oo qaab Shiinays ah oo ZEN ah.
Magaca mashruuca : The Curtain, Magaca naqshadeeyayaasha : Qun Wen, Magaca macmiilka : aoe.
Xafiiska Iibku Qun Wen The Curtain